नेपालमै पहिलो पटक, ५ केजीको बच्चा ज न्मियो; महान आमा, लाई सलाम… – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमै पहिलो पटक, ५ केजीको बच्चा ज न्मियो; महान आमा, लाई सलाम…
7,261 1 minute read
करिब ५ वर्षदेखि उक्त अस्पतालमा काम गर्दै आएका डा. शर्माले यति धेरै तौ लको बच्चा अहिले सम्म नदेखेको बताए। ‘यसअघि ४ किलो आठ सय ग्रामसम्मका बच्चा त देखेको हो तर ५ किलो भन्दा बढी तौल भएको बच्चा त पहिलो पटक देखियो’, उनले भने।
फेरि ह्वात्तै घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य, प्रतिकेजी कति ?
गर्मीले अनुहार कालो भयो ? गोरो बन्न अप्नाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
मडागास्कर जहाज दुर्घटना : ज्यान गुमाउनेको संख्या ८५ पुग्यो